China ZBW (XWB) စီးရီး AC Box-Type Substation ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူ Xinneng
AC box-type substations ၏ ZBW (XWB) စီးရီးများသည်မြို့ပြနှင့်မြို့ပြရှိအထပ်မြင့်အဆောက်အအုံများတွင်အသုံးပြုသောလျှပ်စစ်ဖြန့်ဖြူးရေးကိရိယာများကိုအဆင့်မြင့်ဗို့အားလျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ အဆောက်အအုံများ၊ လူနေအိမ်ရပ်ကွက်များ၊ အဆင့်မြင့်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေးဇုန်များ၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စားအပင်များ၊ သတ္တုတွင်းများ၊ ရေနံတွင်းများနှင့်ယာယီဆောက်လုပ်ရေးနေရာများကိုလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးသည့်စနစ်တွင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုလက်ခံရရှိရန်နှင့်ဖြန့်ဝေရန်အသုံးပြုသည်။
ZBW (XWB) AC box-type ခွဲရုံသည်ခိုင်ခံ့သောပြည့်စုံမှု၊ အရွယ်အစားသေးငယ်မှု၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ လုံခြုံစိတ်ချရသောလည်ပတ်မှု၊ သမားရိုးကျလူထုအခြေပြုဌာနခွဲများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကစွမ်းဆောင်ရည်တူသော box-type ဓာတ်အားခွဲရုံများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ခွဲရုံ၏ ၁ / ၁၀-၁ / ၅ သာလျှင်ဒီဇိုင်းပမာဏနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးပမာဏကိုများစွာလျော့ကျစေပြီးဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ်ကိုလျော့နည်းစေသည်။ ဖြန့်ဖြူးခြင်းစနစ်ကို၎င်းကိုကွင်းဆက်ကွန်ယက်စွမ်းအားဖြန့်ဖြူးခြင်းစနစ်တွင်အသုံးပြုနိုင်ပြီး dual power supply သို့မဟုတ် radiation terminal power power system တွင်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည်မြို့ပြနှင့်ကျေးလက်ခွဲရုံများတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းအတွက်ကိရိယာအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ZBW (XWB) စီးရီး box-type substation သည် SD320-1992 "Box-type substation နည်းပညာအခြေအနေ" နှင့် GB / T17467-1997 "High-voltage / low-voltage prefabricated substation" ၏စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီသည်။
1. အမြင့် 1000 မီတာထက်မပိုပါဘူး။
2. အပူချိန်သည်အမြင့်ဆုံး +40 ထက်မပိုပါ℃, အနိမ့်ဆုံး -25 ထက်နိမ့်သည်မဟုတ်℃နှင့် ၂၄ နာရီအတွင်းပျမ်းမျှအပူချိန်သည် +35 ထက်မကျော်လွန်ပါ℃.
၃။ အပြင်ဘက်လေတိုက်နှုန်းသည် ၃၅ မီတာ / မကျော်ပါ။
၄။ Air phase junction temperature သည် 90% (+25) ထက်မကျော်လွန်ပါ℃) ။
၅။ ငလျင်၏အလျားလိုက်အရှိန်သည် 0.4m / s2 ထက်မပိုပါ။ ဒေါင်လိုက်အရှိန်သည် 0.2m / s2 ထက်မပိုပါ။
၆။ မီးလောင်ခြင်း၊ ပေါက်ကွဲခြင်းအန္တရာယ်၊ ပြင်းထန်သောလေထုညစ်ညမ်းခြင်း၊
မှတ်စု: အထူးအသုံးပြုမှုအခြေအနေများ၊ မှာယူသောအခါကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီနှင့်ညှိနှိုင်းပါ။
Mu အမျိုးအစား： 200-1250
Pin အမျိုးအစား： 50-400
လက်ရှိ IE အဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့
load switch ကို 400-630A
၂၀ * ၂
၁၅ * ၁
၃၀ * ၁
မြေပြင်နှင့်အဆင့် ၄၂ ၃၀ တို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ
ဆေးသုတ်: 35 / 5min
အပူပိုင်း: ၂၈ / ၅ မိနစ်
မြေပြင်နှင့် phase75 60 နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ
၁။ Box-type ဓာတ်အားခွဲရုံပုံစံ၊
2. Transformer မော်ဒယ်နှင့်စွမ်းရည်;
3. မြင့်မားခြင်းနှင့်အနိမ့်ဗို့အား circuit ကိုအဓိကဝါယာကြိုးအစီအစဉ်ပုံ;
4. အထူးလိုအပ်ချက်များနှင့်အတူလျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများ၏မော်ဒယ်များနှင့် parameters တွေကို;
၅။ Shell အရောင်၊
6. အပိုပစ္စည်းများ၏အမည်, အရေအတွက်နှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ။ အပိုပစ္စည်းများ၏အမည်, အရေအတွက်နှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များကို။
ရှေ့သို့ Cummins Generator ကိုစီးရီး
နောက်တစ်ခု: GGD AC အနိမ့်ဗို့အားပါဝါဖြန့်ဖြူးကက်ဘိနက်
ဖြန့်ဖြူး Box ကိုကက်ဘိနက်
Oem Distribution Cabinet